Misintona APK Chat Partner ho an'ny Android 2022 [v18.06]
Aprily 13, 2022 Janoary 21, 2022 by Ali Quli
Salama daholo! Androany isika dia eto miaraka amin'ny fampiharana iray izay tena ilaina ho an'ny mpampiasa finday Huawei. Ny fampiharana dia antsoina hoe Chat Partner Apk. Tahaka ny anao rehetra fa Huawei dia orinasa sinoa ary azo itokisana amin'ny fivarotana Google Apps. Google Play dia rafitra fizarana nomerika miorina any Amerika izay novolavolain'ny Google sy nokarakarain'ny Google.
Tokony ho fantatrareo rehetra ny fifamatorana misy eo amin'i Etazonia sy i Sina, noho izany dia voarara ny Huawei. Tsy navela nampiasa serivisy Google Play tamin'ny famoahana azy ho avy. Na izany aza, ireo maodely taloha dia afaka nampiasa ireo serivisy raha tsy nisy fanavaozana hafa. Tamin'io fotoana io no zava-dehibe ny fampiasana fampiharana fanampiny satria tsy maintsy manome serivisy sahaza ny mpampiasa azy ny orinasa.
Izao no fotoana izay miezaka ny olona mba hitady vahaolana amin'ny olana amin'ny fomba mora sy ny mitovy nitranga ho an'ny mpampiasa ny Huawei. Nahita fomba maro hametrahana ny fivarotana kilalao ny mpamorona ary ny mpiara-miasa amin'ny chat dia iray amin'izy ireo. Ny ankamaroan'ny fomba dia tsy nandeha tsara fa ny Chat Partner full Apk dia miasa tsara hatramin'izao. Izany dia dingana tena tsotra ary ho afaka misintona mora foana Google Play fampiharana.
Holazainay aminao ny fomba ahafahanao mampiasa ny fampiharana sy misintona ny play store ho an'ny findainao. Raha vao nanomboka ny fampiharana ianao dia hanomboka hisintona ny Play Store ho an'ny findainao saingy mila fotoana izany satria mandritra io fotoana io dia mitady loharano samihafa ny fampiharana hisintonana ny fampiharana Google Play Store. Raha tsy manomboka ny fampidinana dia mahazo bokotra fanamboarana eo amin'ny farany ambany amin'ny fampiharana ianao. raha vao manindry izany ianao dia hiezaka hitady fomba hafa hamahana ny olanao ny app.
Tsy maintsy mandalo fizotran'ny fidirana ianao izay hametrahanao ny anaran'ny mpampiasa anao amin'ny tenimiafina hiditra amin'ny app. Ny fizotry ny fisintomana ny fivarotana an-tsehatra mivantana na ny fitadiavana fomba hafa matetika dia mitaky fotoana ary mila manam-paharetana ianao.
Fitahiana ho an'ireo mpampiasa Huawei mahantra izay niatrika olana lehibe izany. Ny mpampiasa Android rehetra dia miankina amin'ny serivisy Play Store satria azo antoka izany ary tsy mila manahy momba ny rindrambaiko manimba ny fitaovanao ianao.
Endri-javatra manan-danja amin'ny Apk Partner Chat
Maimaimpoana ny fampiasana ary tsy ilaina ny fividianana in-App.
Fandraisana tsotra ho an'ny mpampiasa sy ny mpampiasa rehetra dia afaka mandeha mora foana.
Anaran'ny fonosana com.tyq.pro
Ilaina ny Android 5.5 sy ambony
Tsy izahay no mpamorona ofisialy noho izany ka tsy afaka miantoka na inona na inona momba ilay fampiharana izahay. Misy zavatra iray tsy maintsy tadidinao fa mampiasa an'ity app ity ianao ho safidy fanampiny amin'ny fampidinana ireo serivisy Google Play. Natao ho an'ny telefaona Huawei izay tsy manohana na manana ireo serivisy ireo. Ity fampiharana ity dia tsy hisy ilana azy amin'ny fitaovana hafa.
Ahoana no fomba hisintinana ny fiarahana amin'ny chat apk?
Ity fampiharana ity dia azo alaina avy amin'ny tranokalanay. Azonao atao ny misintona ny Apk amin'ny paompy tokana amin'ny bokotra fampidinana. Nanome bokotra fisintomana roa izahay ho an'ny zavatra niainanao tsaratsara kokoa. Raha vantany vao nipaipaika azy ianao dia hanomboka ho azy ny fizotry ny fisintomana ary maharitra segondra vitsy vao manomboka aorian'ny fanoratana. Mila manam-paharetana ianao mandritra ny segondra vitsivitsy.
Ahoana ny fametrahana Apk Partner Apk?
Tokony hanaraka ireto dingana voalaza etsy ambany ireto ianao amin'ny fametrahana azy.
Mandehana any amin'ny Fikirakira findainao> Fanapahana fiarovana ary avelao ny fametrahana avy amin'ny loharano tsy fantatra.
Mandehana any amin'ny mpitantana ny rakitrao, tadiavo ilay Apk alaina avy amin'ny fampirimana fampidinana.
Kitiho ny Apk ary rehefa manomboka ny mpamosavy dia kitiho ny bokotra install.
Tsy maintsy miandry ianao mandra-pahatapitry ny fizotrany.
Ho vonona handeha izao ny fampiharana anao.
Raha te hankafy ny serivisy fivarotana Google play ianao amin'ny fitaovanao Huawei dia ampidino izao ny Apk ary manomboka mampiasa fivarotana.
Raha tianao ity lahatsoratra ity ary maniry fampiharana ilaina kokoa dia tsidiho ny anay Website.
Sokajy Apps, Tools Tags Miara-miasa, Chat Partner Apk, App Partner Chat Post Fikarohana
Esory ny China Apps APK Download ho an'ny Android 2022 [v1.6]
Groot ESP Apk 2022 Download Ho an'ny Android